Daawo Sawirro: Dhismaha Dabaq Dheer oo si layaab leh usoo dummay iyo Qasaaro badan oo ka dhashay!!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Dhismaha Dabaq Dheer oo si layaab leh usoo dummay iyo Qasaaro badan oo ka dhashay!!!
Daawo Sawirro: Dhismaha Dabaq Dheer oo si layaab leh usoo dummay iyo Qasaaro badan oo ka dhashay!!!
Jan 19, 2017WARAR
Dhismo ganacsi oo ka koobnaa 17 biyaano ah ayaa kusoo dumay magaalada Tahran ee Caasimada dalka Iiraan, waxaana bur burka dhismahan ka dhashay qasaaro badan sida ay baahiyeen Warbaahinta dalka Iiraan.
Telefishinka qaranka dalka Iiraan ayaa sheegay in uu bur buryay dhismahan sidoo kale qeyb kamid ah dhismahaas uu dab qabsaday maanta oo khamiis ah, dhismaha ayaana xiliga uu bur burayay ahayd xili hore aysan dad badan ku sugneyn.
Inta la xaqiijiyay bur burka dhismahan waxaa ku dhaawacmay in ka badan 75-qof ay ku jiraan 45-kamid ah shaqaalaha dab damiska, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in ay suurto gal tahay in qasaaraha inta hada la ogyahay uu kasii bato ayna jiraan dad ku dhintay shilkaasi.
Warbaahinta iyo Wakaaladaha Caalamka ayaa tilmamaya in dhismahan uu usoo dumay si layaab leh, waxa ayna tilmaameen in Muuqaalka laga duubay muujinayo sida dhismo Filim lagu jilayo oo kale uu usoo dumayo dhismaha dabnkana uga kacay.
Previous PostQaabka la iskaga Difaaco Eyda dad cunka ah Muuqaal Daawo!! Next PostLo’ lagu xabisay garaashyo ku yaalla Magaalada Muqdisho oo gaajo awgeed u bilaabay iney is-cunaan (Daawo Sawirro)!!